hemodialysis ၌, dialyzer အတုကျောက်ကပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နှင့်သဘာဝကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို၏အရေးပါသောလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုအစားထိုး။
၃၀ စင်တီမီတာခန့်ရှည်လျားသောပလပ်စတစ်ပြွန်၌သွေးကြောသွေးကြောမျှင်ကလေးများဟုလူသိများသည့်အလွန်ကောင်းသောချည်မျှင်အမျှင်ပေါင်း ၂၀၀၀၀ ကျော်ကို ဖြတ်၍ သွေးစီးဆင်းသည်။
ဆံချည်မျှင်သွေးကြောများအား Polysulfone (PS) သို့မဟုတ် Polyethersulfone (PES) ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးအထူးပလပ်စတစ်သည်အထူးစစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် hemo လိုက်ဖက်သောလက္ခဏာများဖြစ်သည်။
သွေးဆဲလ်များနှင့်အရေးကြီးသောပရိုတိန်းများသည်သွေးထဲတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ Dialyzers များကိုစက်မှုနိုင်ငံအများစုတွင်တစ်ကြိမ်သာအသုံးပြုကြသည်။
တစ်ခါသုံး Hollow fiber hemodialyzer ကိုလက်တွေ့အသုံးချခြင်းကို High Flux နှင့် Low Flux ဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။
Ultrapure dialysate filter များကိုဘက်တီးရီးယားနှင့် pyrogen filtration အတွက်အသုံးပြုပါသည်
Fresenius မှထုတ်လုပ်သော hemodialysis device နှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုခဲ့သည်
အလုပ်လုပ်သောနိယာမသည် dialysate ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဆွန်းဖိုင်ဘာအမြှေးပါးကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်
Hemodialysis ကိရိယာနှင့် dialysate ကိုပြင်ဆင်ခြင်းသည်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။
၁၂ ပတ်သို့မဟုတ်ကုသမှု ၁၀၀ ပြီးနောက် Diialysate ကိုအစားထိုးသင့်သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်အတန်းထုတ်လုပ်မှု၊ ဘက်တီးရီးယားတင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ခြင်း၊ endotoxin နှင့်လေးလံသောသတ္တုဓာတ်ပါ ၀ င်ခြင်း၊
တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေး၊ တိကျသော Electrolyte များစုစည်းခြင်း၊ လက်တွေ့အသုံးပြုမှုလုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်နှင့်ကျောက်ကပ်ဆေးကြောခြင်းအရည်အသွေးကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေခြင်း။
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအမျိုးအစားအပြုသဘောဖိအား IV ပြွန်
လိုအပ်သောမရှိသောအပြုသဘောဆောင်သောဖိအား connector သည်လက်ဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သောဖိအားတံဆိပ်ခတ်ခြင်းအစားရှေ့သို့စီးဆင်းမှုလုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်၊ သွေးစီးဆင်းမှုကိုထိရောက်စွာတားဆီးပေးသည်၊ ပြွန်ပိတ်ဆို့မှုကိုလျှော့ချပြီး phlebitis ကဲ့သို့သောပြုတ်ရည်ပြcomplနာများကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြင်ပလူနာခန်း၊ ဓာတ်ခွဲခန်း၊ ခွဲစိတ်ခန်းနှင့်အခြားလိုအပ်သည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်များတွင်၊ အန္တရာယ်ကင်းသောအချက်များနှင့်ဘက်တီးရီးယားများနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များအားခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။
KN95 အသက်ရှူကိရိယာမျက်နှာဖုံးအင်္ဂါရပ်များ -
မျက်နှာ၏သဘာဝပုံစံနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော 1.Nose shell design
နားကိုဖိအားမပေးဘဲ 3.Elastic နား - ကွင်း
ဗဟိုသွေးပြန်ကြောပြွန် pack ကို
ကြင်ဖော်မဲ့ Lumen R 7RF (14Ga)、 8RF (12Ga)
နှစ်ဆ LUMEN: 6.5RF (18Ga.18Ga) နှင့် 12RF (12Ga.12Ga) ......
သုံးကြိမ်မြောက်သော LUMEN： 12RF (16Ga.12Ga.12Ga)
တိုင်းတာခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိသည့်သွေးကိုလူနာများအားဖြန့်ဝေရာတွင်အသုံးပြုသောတစ်ခါတည်းသွေးသွင်းခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ လူနာထဲသို့မည်သည့်ခဲကိုမှမကူးစေရန်တားဆီးပိတ်ဆို့ထားသည့်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုပိတ်ဆို့ထားသော / ပိတ်ထားသည့်ဆလင်ဒါပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ကောင်းမွန်သော elasticity၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်အကွေ့အကောက်များသော ၁။ soft tubing ။
၂။ ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော Transparent drip chamber
EO ဓာတ်ငွေ့များက 3. မြုံ
တောင်းဆိုမှုအပေါ် 5. အထူးမော်ဒယ်များ
၆။ Latex အခမဲ့ / DEHP အခမဲ့ဖြစ်သည်
IV ပြွန်ပြုတ်ရည် set